iRichtersveld Mountain Desert National Park
iRichtersveld National Park imi kanye kwi kona eku kumntla-ntshona wo Mzantsi Afrika, kwaye ijikelezwe ngumlambo we Orange River. Le paki izihekthare ezingama 160,000. Lomhlaba wabangwa ngomnyaka ka 1991, kulandela isivumelwano sobango lomhlaba kunye nengingqi. Lentlango isentabeni, inikeza ithuba lokuba abo bathanda ukubaphandle babekude nayo yonke nje ingxolo yase dolophini.
iRichtersveld Mountain Desert National Park yokuqala yayidityaniswe kunye ne /Ai/Ais – ehambisana nayo engakumda we Namibia-Ngomnyaka ka 2003 ukuze kusekwe itransfrontier park yokuqala yokuqala yase Mazantsi Afrika.
iRichtersveld - iEden Engaqhelekanga
Indawo yase Richtersveld imi kumntla ntshona welizwe lo Mzantsi Afrika. Kwaye ikude nayo yonke enye into, yohlulwe lulwandle lwe Atlantic ngase ntshona, yi Namib Desert emntla...more
Ubungqina bokuqala babantu eNamaqualanda kunye nase Richtersveld bubonakala ngezixhobo zamatye, ezifana nezinto zokunqunqa, amazembe enziwe ngamatye. Ezi zixhobo zokuqala zangexesha...more
Ixesha loku Ndwendwela eRichtersveld
Lo zihlobo zam, ngumbuzo omkhulu. Kwaye akululanga ukuwuphendula. Okokuqala, iintyatyambo zikhona unyaka wonke. Iintyatyambo zase hlotyeni (ezifana nezaziwa ukuba zi’crassulas’)...more
Ubume Bomhlaba Wase Richtersveld
Ngaphambi kokuba singene nzulu, masikhe siqale sithathe nje umzuzwana siziqhelanise nobume bomhlaba wale ngingqi. Ngokwendawo ome kuyo, ubukhulu bommandla wase...more
Amatye Ase Richtersveld
Umba wobume bomhlaba ngumcimbi othande ukubanzima noxakayo. Ngaphezulu, iRichtersveld kunye ne Namaqualand ziqhayisa ngembali ende etyebileyo,neyenza...more
Ukufika Kwabathunya Bevangeli Bokuqala eRichtersveld
Ababizwa ngokuba zi ‘Hottentots’ akwaziwa njengama Khoikhoi kunye nabaThwa bakhutshelwa bucala nngama Yurophu amatsha awayesandula ukufika antliziyo zimbi ezingenabu thixo kwaye abangaboni abangafuni...more
Ibiodiversity yase Richtersveld kunye nase Namaqualand iyamangalisa. Lo ngu mmandla owomileyo nofumana imvula emalunga nama 150mm ngonyaka. Ngamafutshane lendawo...more
Uhlanga Olaziwa Njenge Bastaards lase Richtersveld
Emveni kohambo lokuqala luka Van de Stel elisingise kwintaba ye khopha (copper), indlela eya ekudeni kwamantla yayisele yenziwe. Indlela yayingaxakekanga nakancinci, kodwa kwiminyaka engama khulu amabini...more
Ulawulo Lomhlaba wase Richtersveld
Phezulu eRichtersveld, isitishi sase mishini sama Kuboes sasilawula ngumfundisi olungileyo umfunisi uHein, wecawe iRhenish. Abantu bakhona yayingama Nama Khoikhoi, nabaThwa, nentsapho ze Baster...more
Ngonyaka ka 1957, ‘abantu bebala’ base Richtersveld banikezwa icingo elibambekayo elalihamba phakathi kwendawo zokuhlala ne fama ‘ezisesiphakathini’ amafama aphakathi komlambo nolwandle...more
Umhlaba weSintu nowe Bhotani waseRichtersveld
iRichtersveld yingingqi ezimele yodwa; ishushu, yomile kwaye ikhangeleka ngathi ayinabomi. Ewe kona inobuhle obuyimfihlakalo. Kodwa ingaba indawo eyome ngelahlobo inikwe isikhundla...more
Ukuhlola iOrange River
Ngeminyaka yo 1770, iqela elitsha labahloli langena eNamaqualand. Yayizi nzululwazi, ababukeli beentaka, nabasebenza ngezityalo ababetsalwe zizityalo ezingaqhelekanga zalo mmandla nezilwanyana zasendle...more